Somaliland: Maxaa Sababay In Xarumaha Wasaaradaha iyo Xafiisyadda Dawladda Quful Lagu Jebiyo? – HormoodNews
Somaliland: Maxaa Sababay In Xarumaha Wasaaradaha iyo Xafiisyadda Dawladda Quful Lagu Jebiyo?
12/05/2017 7:35 pm by HormoodNews Views: 7
Hargaysa (HMN): Muddo laba bilood ah ayaa gebi ahaanba istaagay shaqadii ay bulshadda u qaban jireen dhamaanba wasaaradaha iyo hay’adaha kala duwan ee xukuumadda Somaliland, tan iyo markii uu bilaabmay ololihii tartankii doorashadii madaxtooyadda.
Kadib markii aanu kormeer ku soo samaynay intoodda badan xafiisyadda wasaaradaha xukuumadda iyo hay’adaha kale ee dawladda in qaarkood Quful lagu dhejiyay, isla markaana shaqaalaha laftoodii aanay iyag-na muddo ka soo xaadirin.
Waxaana jirta in wasiirrada xukuumadda sii tegaysa ee Siilaanyo intoodda badan aanay muddo dhawr bilood ah ka soo xaadirin xafiisyadda, kuwaasoo markii hore ku mashquulsanaa ololihii doorashadda, inkastoo tallaabadaas lafteedu ay sharci darro ku ahayd in masuul xil u haya ummadda uu shaqadii qaranka kaga mashquulo wax aan sahqadiisa ahayn.
Halkay imika-na saf ugu jiraan habeen iyo maalinta guriga madaxweynaha la doortay Muuse Biixi, oo ay ka quudaraynayaan bal in uu kuu soo darro golihiisa wasiirrada ee xukuumadiisa cusub, maadaama oo aanay wakhtigan jirin cid si buuxda ula xisaabtamaysa oo lagu jirro xili kala guur ah.
Sidoo kale qaar ka mid ah wasiirrada xukuumadda xilkeedu dhamaaday ayaa lagu tilmaamay sababtay xafiisyadda ugu soo shaqo tegi waayeen in markii ay ka soo quusteen rejadii ay qabeen in madaxweynaha la doortay uu ku darayo golihiisa wasiirrada.
Sidaas darteed-na iyagoo ka quus jooga diidmadda Muuse Biixi ay kala kulmeen in ay taa bedelkeeda ay guryahoodda iska jiifaan, wixii hanti iyo lacag ahaa ee ay xadi karayeena nooc kastoo ay tahayba ay jeebabka ku shubteen.
Maqnaanshiyaha masuuliyiinta dawladda shaqadii ay qaranka iyo ummada-ba u hayeen ayaa si weyn looga dareemay xarumaha dawladda ee caasimadda Hargaysa, kuwaasoo aad ku arkayso in ay hor tuban yihiin dadweynihii ay u adeegi lahaayeen oo qaarkood noo sheegeen in muddo bil iyo dheeraad ah ku soo noq-noqonayeen.
Waxaanay dadweynaha shacabka ah ee weeyay cid u qabatadda adeegyadii ay u qaban jireen xafiisyadda dawladu si aadda ula yaaban yihiin, isla markaana ay six un uga rejo go’een kana qanceen in mar danbe ay wax adeeg ah u soo doonteen xarumaha dawladda.
Geesta kale siday noo xaqiijiyeen weriyeyaal ku sugan magaalooyinka kala duwan ee dalka waxaa iyag-na gebi ahaanba mudooyinkan danbe wax shaqo ah aan qaban xafiisyadda laamaha dawladda ee goboladda sida badhasaabyadda, maayaradda iyo xafiisyadda kale ee dawliga ah.
Iyadoo xafiisyadaasi intoodda badan qufulku ku jiidan yahay bil iyo dheeraad, kuwaasoo aan la ogayn sababta keentay in ay sidaas u dayacaan hawlihii adeegayadda bulshadda ee ay ummadda u qaabilsanaayeen oo markii hore-ba aanay si fiican ugu fulin jirin.
Isku soo wada duuboo, sababta keentay in masuuliyiinta xukuumadda xilka ka sii degayaa ay muddo laba bilood ku dhaw uga mashquuleen shaqadii ay qaranka iyo shacabka uga masuulka ahaayeen ayaa loo arkaa mid ceeb iyo qaran-jab ku ah nidaamka dawladnimo.